Soo dejisan Spark 2.8.3 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Spark
Miyay jirtaa – software ah in fariimaha deg dega ah ee internet-ka hoos-maamuuska ee XMPP. Software waxa ku jira tiro qalab ay ka mid yihiin, muddo hubiyo, faylasha sarrifka, abuurista chat group oo cod, la abuuro qoraal ama liiska hawl iwm Spark ayaa wanaajiyey ilaalinta nidaamka oo bixiya isgaarsiinta ammaan la kuwa kale ee isticmaala. Software waxa kale oo uu awood u siisaa inuu ballaariyo fursadaha gaarka ah ay isku xidha daro kala duwan. Spark uu leeyahay dareen leh oo si sahlan loo isticmaali interface.
Fariin Instant hoos-maamuuska ee XMPP
Create chat group iyo cod
Soo dejisan Spark
Faallo ku saabsan Spark
Spark Xirfadaha la xiriira
Daad – way fududahay in loo isticmaalo macmiil qulqulaya feylasha-wadaagista internetka. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad soo dejiso ama soo dejiso waxa ku jira shabakadaha kala geddisan ee webiga.
360 Wadarta Amniga Aasaasiga ah – fayraska wuxuu taageeraa matoorada maxalliga ah ee dheeraad ah ee loogu talagalay kahortagga kombiyuutarka aasaasiga ah ee ka dhanka ah hanjabaadaha khadka tooska ah iyo kan tooska ah.